सडक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं | गृहपृष्ठ
Home विकास सडक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं
on: १९ बैशाख २०७५, बुधबार ०८:४४ विकास
सडक विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिएका छौं
रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्यामप्रसाद यादवसँग नगर विकास र योजनाबारे आर्थिक अभियान दैनिकका दीपेश पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
नगरको समग्र विकासका लागि योजना के के छन् ?
नगर विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ सडकलगायत योजनालाई नगरपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । विकासको दृष्टिकोणले यो नगरपालिका पछाडि रहेको छ । त्यसैले, नगरको समग्र विकास हुने योजना नै छनोटमा परेका छन् । नगरका जनतालाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन नगरपालिकाले सडकसँगै कृषिक्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको छ । गाउँ–गाँउसम्म सडक पु¥याउन सोहीअनुसार योजना बनाइएको छ । अहिले नगरपालिका भएपछि जनतालाई विकासको अनुभूति दिन यी योजना महत्त्वपूर्ण छन् । यस्ता योजनाले नगरको समग्र विकास हुने अपेक्षा लिएका छौं ।
यी योजनामध्ये प्राथमिकताका योजना के के हुन् ?
यी योजनामध्ये मुख्य प्राथमिकतामा सडक नै पर्छ । सडक भएपछि यहाँका बासिन्दालाई आवतजावत र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा सहज हुन्छ । त्यसैले, ग्रामीणस्तरमा समेत पक्की सडक निर्माणको कामलाई अघि सारेका छौं । नगरपालिकाको हरेक टोलमा पक्की सडक पु¥याउने योजनाअनुसार काम भइरहेको छ । नगरपालिकाको १ करोड ४५ लाख बजेटमार्फत अहिले सुन्दरपुर, गढीमाई, बसबरियालगायत टोलमा सडक निर्माणले गति लिएको छ । यसरी टोल टोलबाट विकासको लहर शुरू भएको छ । नगरका हरेक गाउँमा पक्की सडक भएपछि उक्त सडकलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्न सकिए नगरको आर्थिक समृद्धि टाढा छैन । त्यसैले, नगरपालिकाले सडकलाई नै प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । यस वर्ष टोल टोलका करीब १० किलोमिटर सडक पक्की ढलान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
नगरपालिकाका आन्तरिक स्रोत के के छन् ?
निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । साविकका गाविसलाई गाभेर नगरपालिका बनाएकाले आन्तरिक स्रोत खासै छैन । यस नगरपालिकामा बाग्मती नदी पनि पर्छ । नदीजन्य पदार्थ आय स्रोतमा पर्छ । तर, त्यो प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह, कुनमा रहने भन्ने अन्योलमा नै छ । अर्कोतर्फ नगरपालिकाबाट दिँदै आएको सेवाशुल्कको कर पनि आन्तरिक स्रोतमै पर्छ । यो नगरपालिकाको मलाही माछा उत्पादनका लागि प्रख्यात मानिन्छ । नगरपालिकाको पनि आफ्नै पोखरी भएकाले त्यो पनि आन्तरिक आयको स्रोतको रूपमा छ । यस्तै, विभिन्न स्थानमा लाग्ने हाटबजार ठेक्का पनि नगरपालिकाको आयस्रोत हो । आगामी दिनमा आन्तरिक स्रोत बढाउन नगरपालिका विभिन्न योजना र लक्ष्य लिएर अघि बढेको छ ।
अहिले स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, यो भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्न के कस्ता चुनौती देख्नुहुन्छ ?
पहिले गाविसमा रहँदै आएका जनता अहिले नगरपालिका हुँदा के कस्ता सेवा पाइन्छ भन्ने अन्यौलमै छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको भूमिका र महŒवको बारेमा नगरवासीमा प्रस्ट बुझाइ छैन । त्यसैले, सर्वप्रथम नगरवासीलाई नगरपालिकाले दिने सेवासुविधा तथा संवैधानिक व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक छ । न्यायिक समिति नगरपालिकामै हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । उनीहरूलाई यस विषयमा बुझाउन धेरै समय लाग्छ । त्यो पनि एउटा चुनौतीकै रूपमा लिएको छु । अर्कोतर्फ, नगरपालिकाको उप–प्रमुखलाई नै न्यायिक समितिको संयोजक तोकिएको छ । तर, कानूनको अभावमा न्यायका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । भौतिक संरचनाका साथै कर्मचारी अभावले पनि प्रभावकारी रूपमा न्याय सम्पादनका काम हुन नसकेका हुन् । विस्तारै नगरवासीले पनि बुझ्दै गएपछि सहज हुने अपेक्षा छ ।
गढीमाई नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन यहाँका राजनीतिक दलको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, हरेक योजना छनोटमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई समावेश गर्दै आएका छौं । उनीहरूको संलग्नता तथा प्रत्यक्ष निगरानीमै योजनाका काम भइरहेको छ । नगरपालिकाको काममा विरोधभन्दा पनि सुझाव र सल्लाह दिएर अघि बढ्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दछु । अर्कोतर्फ, केन्द र प्रदेशको बजेटमा नै स्थानीय तह निर्भर रहने गर्छ । त्यस कारण यस नगरभित्र रहेका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले केन्द्र र प्रदेशको बजेट नगरमा ल्याउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यो नगरलाई अन्यभन्दा फरक बनाउन सम्भावनाका क्षेत्र र स्रोतसाधन के के छन् ?
यो नगरपालिकालाई अन्यको तुलनामा फरक बनाउन धेरै स्रोतसाधन छन् । रौतहटको पुरानो र ऐतिहासिक बजारको रूपमा रहेको समनपुर यो नगरपालिकामा पर्छ । यस्तै, पुरातात्त्विक महत्त्वका अन्य संरचना पनि यहाँ छन् । यस्ता सम्पदाको संरक्षण गरेमा नगरपालिकालाई फरक रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्फ, माछा उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिने मलाही पनि यसै नगरभित्र रहेकाले माछाका पारखीको गन्तव्यस्थल बनाउन सकिन्छ । यस भेगका जनताको आस्थाको केन्द्र रहेको गढीमाई मन्दिरको उचित प्रचारप्रसार गरेमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुन्छ । अन्य धेरै पुराना मठमन्दिर पनि नगरभित्र रहेकाले धार्मिक गन्तव्यस्थल बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।